IsiJalimane, iJalimane amadolobha esihlala kuwo ... - IGERMAN
« : Okthoba 18, 2015, 03:01:46 pm »
Bangani, ngicabanga, uma wonke umuntu ekhuluma ngedolobha ahlala kulo, abasebenzi babo, amandla abo okusebenza, njalonjalo, sizonikeza imibono ethile kubangani bethu abasha. Wonke umuntu unelukuluku lokwazi idolobha lekusasa noma amadolobha angomakhelwane aseduze, baqala izimpilo zabo ezintsha ngokwesaba okuncane. Bengicabanga ukuthi bazoluthola ulwazi ngamadolobha azongena ngaphansi kwalesi sihloko ..
Kungumuzi omncane kakhulu. Ingxenye encane yedolobha isuka lapha iye entshonalanga noma iye emadolobheni amakhulu. Ukuthenga ukudla nsuku zonke kushibhile kakhulu uma kuqhathaniswa namanye amadolobha. i-mylau, idolobha elincane elinotshani obuhlanzekile, obunokuthula, nohlaza. amadolobha ethu angomakhelwane yi-reichenbach ne-netzschkau. kulawa madolobha athe ukuba makhulu kancane kuno-mylau. Abantu abanamathuba amancane emisebenzi noma abangenawo nhlobo, kufanele baye emadolobheni angomakhelwane noma emadolobheni akude kakhulu. Indlu yedolobha enkulu eseduzane iqhele ngamakhilomitha angama-60 ukusuka kithi. Amadolobha e-zwickau ne-pluen akude ngamakhilomitha angama-25. kunamathuba emisebenzi, ungathola konke ngemisebenzi yomphakathi.
Akukho kuphila ebusuku, indawo yokudlela noma ikhefi edolobheni lethu. I-mylau yidolobha elizolile futhi elinokuthula. Abantu abasha abahle ngempilo yabo bahle, bangumuzi omuhle
Re: amadolobha esihlala kuwo ...
« Phendula #1: Okthoba 30, 2015, 01:11:19 pm »
Idolobha elinabantu cishe abangama-95,000 futhi cishe abantu abangama-30% abantu baseTurkey. IFrankfurta 20 km Offenbach 10 km darmstadt 50 km Aschaffenburg 30 Km
Njengoba kuqondakala emphakathini, kunezindawo eziningi zokuthenga, kunezimpilo eziningi ezimnandi zasebusuku futhi zanele inani labantu (kukhona enye i-frankfurt, yebo)
Kunamamoski acishe abe ma-5 kwihanau (kuyathakazelisa ukuthi ahlukaniswe kuwo njengombono wezwe nenkolo)
Kunezimakethe eziningi zaseTurkey, kufaka phakathi iTansas nazo zonke izimakethe zaseJalimane ezaziwayo.
UMfula iMain-kinzig odlula edolobheni unendawo enhle futhi ekhangayo eluhlaza futhi emangalisayo.
Uma wenza isibonelo sedolobha elinezinye izindlela eziningi njengamathuba emisebenzi
IFrankfurt flughafen, esinye sezikhumulo zezindiza ezinkulu kunazo zonke eYurophu
Njengoba wonke umuntu azi, IDUNLOP -GOODYEAR isilapha.
Ngasikhathi sinye, imboni yeHERAEUS Chemistry kanye nengilazi
ingxenye enkulu yabantu isebenza lapha
Ezokuthutha zikhululekile kakhulu, kungenzeka uye endaweni oyifunayo, noma ungenayo imoto.
Kunezifundo ezingaba ngu-5 zolimi lwesiJalimane eHanauda
Ngamafuphi, kungumuzi onempilo enhle kepha kunzima ukufunda isiJalimane (baningi kakhulu abantu baseTurkey, abameli bezinwele, abasebenzi besifundo, abasebenzi bezindiza, njll.)
« Phendula #2: Novemba 26, 2015, 10:01:47 pm »
Sawubona kuqala Amaforamu amahle
Kunemvelo enamandla kakhulu enamathuba emisebenzi.UFriedrich Engels uyindawo azalelwa kuyo, ngakho-ke yisifunda esinamakhomanisi amaningi athanda izinto ezibonakalayo namalangabi.
Ekuhlanganyeleni okunzima kwe-Kut, kufaka phakathi i-duisbur hhayi njenge-marlox, izimpisi zama-arab, ama-mosque ase-turkey abelokhu ehlukaniswe njalo, ahlala ezahlukanisa, alwa nempisi yaseTurkey njalo ngenyanga, kumaJalimane abethu bahleka ngokudla amasoseji.
Abanye babo bayayibuka, futhi ngiyawubheka lo mcimbi ngokuhleka nokudumala.
Isilinganiso sabantu cishe silinganiselwa ku-250000. Sinezitimela zaso ezidumile nezidumile.Idume ngohlaza lwayo futhi ingaphezu kwayo.Ikhona i-zoo.Ngamafuphi, iyidolobha elihle kakhulu uma lingoni abantu bakithi .
Kepha ukuze bamemezele imibono yabo futhi bakhiphe iqembu lezepolitiki, bavimba isithunzi sethu kabi kakhulu.Kuphuma umuntu amemeze nefulegi laseTurkey
Uma singabali okwethu, kungumuzi wesiphetho
« Phendula #3: Meyi 09, 2018, 02:57:23 pm »
INGABE UYAYAZI I-RODGAU, NGIZOZA NGAYO! INHLONIPHO